Heroes of Might and Magic II 0.9.15 dia efa nivoaka ary ireto ny vaovao | Ubunlog
Heroes of Might and Magic II 0.9.15 dia efa nivoaka ary ireo no vaovao
Darkcrizt | 07/05/2022 23:53 | Nohavaozina amin'ny 12/05/2022 22:05 | Games
ny Heroes of Might and Magic II 0.9.15 vaovao navoaka, izay miaraka amina andiana fiovana mahaliana, izay misongadina ny fanatsarana ny AI, ary koa ny fanatsarana sy ny fanamboarana bug amin'ny ankapobeny.
Ho an'ireo tsy mahalala Maherifo mahery sy mazika II, tokony ho fantatr'izy ireo izany lalao paikady tetika mifototra amin'ny turn novolavolaina tamin'ny taona 1996. Ny tantaran'ny lohateny mitohy amin'ny famaranana kanônika an'ilay teo alohany, niafara tamin'ny fandresen'i Lord Morglin Ironfist.
Ny lalao dia misy fanentanana roa, ny iray tantanan'ny mpanohitra (izay canonika) ary ny iray amin'ny fiankinan-doha. Ny fomba fandrosoana dia tsy miova. Ny mpilalao dia tsy maintsy manangana fanjakana, manatsara azy hatrany, mahazo loharanom-pahalalana, mampiofana miaramila, ary miomana hampiato ny fanafihan'ny fahavalo. Ary koa, ny tanjona faratampony dia ny mbola hahitana sy handresy ny tranon'ny mpanohitra anao.
Nasongadin'ireo mpandrindra fa tsy manana mpamorona ny ekipa ilay tetikasa mila manamboatra ny lesoka amin'ny sarimiaina ireo sary tany am-boalohany ianao.
Noho izany dia entanina ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny drafi-kevitra momba ny atidoha ho fampandrosoana ny fanitarana, izay hifindran'ny mpamorona rehefa avy namerina tamin'ny laoniny tanteraka ny lalao tany am-boalohany izy ireo.
1 Fampisehoana vaovao lehibe an'ny Heroes of Might and Magic II 0.9.15
2 Ahoana ny fametrahana ny Heroes of Might and Magic II amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Fampisehoana vaovao lehibe an'ny Heroes of Might and Magic II 0.9.15
Amin'ity eversion vaovao ity nanampy ny fanohanan'ny cursor monochrome, ary koa varavarankely misy a lisitry ny "hotkeys" misy ary nitarina ny varavarankelin'ny firafitry ny menio lehibe miaraka amin'ny fahafahana mampifanaraka ny feo, ny fomba soratra manokana ary ny lokon'ny cursor avy amin'ny sakafo lehibe an'ny lalao.
Ny iray amin'ireo fiovana misongadina amin'ity dikan-teny vaovao ity dia a Ny fanavaozana AI izay mampiasa ny ody "Jereo Rehetra". mba hatomboka amin'ny sarintany aventure.
Ary miresaka momba ny fanatsarana ny AI, dia misongadina ihany koa iray izay mamonjy mana rehefa mampiasa ody mihetsika eo amin'ny sarintany fitsangatsanganana, ary koa ny fanatsarana ny AI amin'ny fanaovana kajy ny lalana tsara indrindra amin'ny sarintany fitsangatsanganana amin'ny toerana tery mba tsy hifampiraharaha ny maherifonao.
Ankoatra izay dia asongadina ihany koa fa nohavaozina sy nohalavaina tanteraka ny fampiharana ny « hotkeys ».
Fanampiana fanampiny ho an'ny teny Okrainiana, ary koa ny fampiharana fandikan-teny fototra.
Fandikan-teny Rosiana, Norvezy, Frantsay ary Poloney nohatsaraina.
Ny pop-ups nandritra ny famelabelarana mialoha ny fampielezan-kevitra dia nohavaozina miaraka amin'ny fanoharana amin'ny antsipiriany sy ny famaritana ny bonus sy valisoa.
Namboarina ny bonus sasany amin'ny fampielezan-kevitra diso
Nampiana hotkey hisafidianana bonus
Ny famandrihana fikandrana UI fampielezan-kevitra dia miadana be amin'ny famaliana rehefa manova bonus
Namboarina ny sandan'ny fidiram-bolan'ny fanjakana ho an'ny toe-javatra misy loharanon-karena fanampiny
Farany, raha liana hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao amin'ny famoahana ity kinova vaovao ity. Azonao atao ny manamarina ny antsipiriany Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Ahoana ny fametrahana ny Heroes of Might and Magic II amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Ho an'ireo liana hahafahanao mametraka ity lalao ity amin'ny rafitrao, tsy maintsy manana farafahakeliny kinova demo an'ny lalao Heroes of Might and Magic II afaka milalao azy.
Mba hanaovana izany, ampiasao fotsiny ny iray amin'ireo scripts azo sintonina natolotra hahazoana ny kinova-dalao an'ny lalao voalohany.
Amin'izay mba ho an'ny Linux dia ilaina ny fametrahana mazava tsara ny SDL ary ho an'ity, script / Linux fotsiny araka ny fonosin'ny rafitra fiasanao ary manaova ny fisie.
avy eo ny script tsy maintsy vonoina hita ao / script
Mba hahafahana misintona ny fampisehoana ny lalao ilaina amin'ny fivoarana kely.
Vantany vao vita izany dia manaova fanatanterahana ao amin'ny lahatahiry root an'ny tetikasa. Ho an'ny fanangonana SDL 2, mila mihazakazaka ny baiko alohan'ny handrafetana ilay tetikasa ianao.
Ny kaodin'ny tetikasa dia voasoratra ao amin'ny C ++ ary zaraina eo ambanin'ny lisansa GPLv2. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ilay tetikasa ianao na hijery ny kaody loharano misy azy dia azonao atao izany avy amin'ny rohy etsy ambany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Games » Heroes of Might and Magic II 0.9.15 dia efa nivoaka ary ireo no vaovao
Linux 5.18-rc6 dia manoro hevitra fa miatrika ny iray amin'ireo dikan-teny lehibe indrindra amin'ny kernel isika, na dia tsy amin'ny habeny aza.
KDE dia manampy endri-javatra vaovao ho an'ny Plasma 5.25 ho avy, toy ny tontonana "mitsingevana" vaovao